Munyika yekushambadzira yedhijitari, maturusi ekugonesa ekutengesa akakosha kuti masangano ape vashandi zviwanikwa zvinodiwa kudzika zvigadzirwa zvevatengi zvinobudirira. Hazvishamisi, marudzi aya emasevhisi ari kudiwa zvakanyanya. Kana dzakagadzirwa uye dzichishandiswa nemazvo, dzinogona kupa masangano ekushambadzira edhijitari nemidziyo inodiwa kuendesa zvemhando yepamusoro, zvinoenderana nezviri kune vangangove vatengi. Maturusi ekugonesa ekutengesa akakosha pakubatsira masangano kubata uye kugadzirisa kutenderera kwekutengesa. Pasina ivo, zviri nyore
Matatu Mamodheru Ekushambadzira Indasitiri Yekushambadza: CPA, PPC, uye CPM
Chitatu, Kurume 2, 2022 Chitatu, Kurume 2, 2022 Ivan Baidin
Kana iwe uchida kubudirira muindasitiri inokwikwidza zvakanyanya sekufamba, unofanirwa kusarudza nzira yekushambadzira inofambirana nezvinangwa zvebhizinesi rako uye zvekutanga. Neraki, kune akawanda mazano ekuti ungasimudzira sei brand yako online. Isu takasarudza kuenzanisa iyo inonyanya kufarirwa kwavari uye kuongorora zvayakanakira nezvayakaipira. Kuti uve akatendeseka, hazvibviri kusarudza muenzaniso mumwe chete wakanakisisa kwose kwose uye nguva dzose. Major
Chipiri, Mbudzi 3, 2020 Chipiri, Mbudzi 3, 2020 Douglas Karr
Saiye mushambadzi, musimboti wezvekuedza kwedu kuyedza kutaura kuti kutengesa, kushambadza, uye kushambadza matanho atakatora kufambisa tarisiro yedu parwendo rwevatengi. Vanotarisira vatengi vangangodaro vasingateedzere nzira yakachena kuburikidza nekushandurwa, zvakadaro, zvisinei nekuti zvinoshamisa sei chiitiko. Kana zvasvika pakushambadzira, zvakadaro, mutengo wekuwana unogona kudhura… saka tinotarisira kuvamanikidza kuti tikwanise kuona nekuvandudza mhedzisiro yedu. A